. ओलिलाइ चारै तिर बाट घेराबन्दी ,के यसपाली सत्ता संकट टर्ला त?::Online News
भर्खरै : ओलिलाइ चारै तिर बाट घेराबन्दी ,के यसपाली सत्ता संकट टर्ला त?
प्रकाशित मिती : २०७७ चैत्र ३ गते , मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि राजनीति जिबनकै सबै भन्दा ठूलो घेरा बन्दिमा परेका छन । दुई पट्क आफू विरुद्धको घेराबन्दी तोड्दै सत्ता जोगाएका ओलिलाइ यश पटक भने निक्कै ठूलो चुनौती छ ।
ओलि एस्तो घेरा बन्दिमा छनकी कुनै पनि बेला उनको सत्तामाथी छापामार शैलीमा प्रस्तुत हुनसक्छ । नेकपा एमाले भित्र ओलि घेरा बन्दिमा छन । नेपाली काङ्ग्रेस ,माओवादी केन्द्र ,समाजबादी पाटिबाट पनि ओलि घेराबन्दिमा छन ।
आफ्नै पाटी भित्र माधव कुमार नेपाल ,झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले ओलिलाइ घेरा बन्दिमा पारेका छन । यी ठुला ३ नेता मिल्दा ओलि पाटी भित्रै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन ।
काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा ओलि भित्र समीकरण बढ्ने संभावना बढ्दौ बन्दै गएको छ । ३ दल मिलेर ओलिलाइ घेराबन्दिमा पार्ने माओल शृजना गर्दै छन । ओलि विरुद्ध ३ दल एक ढिक्क भएर लागेमा कठिन परिस्थिति आउन सक्छ । उनको सत्ता ढल्न सक्छ ।
ओलि संग अब घेरा बन्दि तोड्ने केही विकल्प मात्र बाकी छन । नेकपा एमाले एकजुट बनाउने र माओवादी केन्द्र संग सहकार्य गर्ने वा एकता बिकल्प हुन सक्छ । जस्कालाइ ओलिले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नु पर्छ त्यसमा उनी सहमति छौनन । प्रधानमन्त्रीमै कायम रहेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ लिने संभावना असंभवता देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसकै साथ लिने आसा पनि ओलिलाइ छ । निर्वाचनमा जाने सर्तमा त्यो केही सम्भव हुन सक्छ । तर काङ्ग्रेस भित्र ओलिलाइ समर्थन गर्ने विपक्षमा मावल छ । काङ्ग्रेसलाई सरकारले नेतृत्व दिएर ओलि अगाडि बढ्ने अन्तिम अस्त्र पनि हुन सक्छ । यस्तो समीकरणको विपक्षमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देखिएका छन ।
इटहरी र खनार बिचमा सवारी दुर्घटना